Downloads 4 162
Created 15-12-2012 22: 56: 21
Akachinja 17-12-2012 00: 22: 55
Munyori: Simhangar Team, Lukasz Kubacki, Michal Puto http://www.simhangar.com
RWD-8pws nokuda FSX & P3D yemhando yepamusoro uye runako. Ndege ari kutakura pendi zano kubva CWL Dêblin (ruchibhururuka chikoro). Rave vakasikwa FSX-Yechipiri SDK. Zvinoreva kuti unofanira kuva zvakanaka puranga prices nayo. Uyezve, iye achava kushanda DirectX 10 muoti vakatendeukira pasina matambudziko. Iye ane kuzvidzora mumvuri uye anokosha textures zvakadai: Specular Maps uye Normal Maps. Ona, kuti nokuda 3D Cockpit zvausingakwanisi hazvina dzika nokuzvidzora mumvuri muna VC.
The yepakutanga 3D womuenzaniso yakavakwa pamusoro War pamusoro Poland Mod yakavakwa pamusoro Targetware sim injini. Ndege Ndiro RWD-8pws shanduro. Zvisinei, zvakanga akawedzera vashoma rehurumende pendi namano RWD-8 dwl, zvakare (onai pazasi). Cherechedza kuti achiri PWS shanduro 3D womuenzaniso.
RWD-8 shanduro zvinowanikwa muna FSX / P3D rongedza:
RWD-8pws, Centrum Wyszkolenia Lotniczego (CWL) Deblin, pakati-30 vaMwari, Poland RWD-8pws, Romanian Air Force, mangwanani 40 raMwari
RWD-8pws, Training dzechikwata, 1st Air chemazana chehondo, Warsaw, Poland RWD-8pws, Gen. Franco Uto, Spain, mushakabvu 30 vake.
RWD-8pws, 6th Air chemazana chehondo, Lwow, Poland RWD-8pws, Luftwaffe miedzo, mangwanani 40 vake.
RWD-8dwl, vehurumende remazita SP-ZHP, Bielsko Aleksandrowice Aerodrome (EPBA), Poland RWD-8dwl, vehurumende remazita VQ-Various, Jewish kambani ndege "Aviron", mangwanani 40 vake, Palestine.
RWD-8dwl, vehurumende remazita SP-BLC, Warsaw aero AND tsvimbo, Mokotow Airfield RWD-8pws, Soviet Air Force, mangwanani 40 raMwari
RWD-8pws, Hungary Air Force, mangwanani 40 raMwari
Notice: uchaonawo "Paintkit" forodha muna FSX / SimObjects / Aircrafts / RWD_8pws forodha. The paintkit rine zvitatu .PSD mafaira vane akaturikidzana zvose zvinodiwa kusika zvimwe repaint.
Tapota verenga mapepa kwaisanganisira
Vhidhiyo iyi inoratidza munhu unterminated Arifa shanduro, cherechedza kuti muenzaniso iripo kukopa musi Rikoooo zvakakwana uye nani unhu.
Downloads: 14 816
Downloads: 4 753
Downloads: 17 215
Downloads: 3 313
Downloads: 1 417
Downloads: 4 778